Profile Company - Zhejiang Headman Safayn Technology Co., Ltd.
Lataliyihii On shaandheeyeyaashu Shiidaalka
Lataliyihii On shaandheeyeyaashu Oil
Qaybaha Filter shidaalka
Qaybaha Filter Oil
Shiidaalka Water Separators
Qaybaha kale ee Filter
Zhejiang Headman Safayn Technology Co., Ltd.
(Previous sida Filter Zhejiang Rongsun Co., Ltd.), waxaa la aasaasay ee gobolka Guangdong ee 1999, haatan waxa uu ku yaalaa magaalada Jiaxing, waa mid ka mid ah shirkadaha ugu horeeysa ee culus-waajib warshadaha filter baabuurta. Iyadoo magaalada diiwaangashan 30 milyan oo RMB, workshop 31 kun oo mitir oo laba jibbaaran oo in ka badan 200 oo shaqaale, Headman ayaa 10 milyan oo awooda wax soo saarka ee sannadlaha ah oo ka mid ah noocyada kala duwan ee shaandhada.
Iyada oo muddo 20 sano ah 'hal-abuurka iyo horumarinta, Headman ayaa sameeyay in ka badan 1000 noocyada kala duwan ee wax soo saarka, oo daboolaya mashiinada dhismaha, baabuur culus-waajib, basaska raaxo, maraakiibta, sets matoor naaftada, komberesarrada hawada, Quwadda, ilaalinta deegaanka, oo daahirinta, oo badan oo kale goobaha warshadaha la xiriira. Shirkadda ayaa sidoo kale marti tiro ka mid ah hawlaha OEM kusaabsan saarayaasha caalami ahaan caan ', la dhiso xiriir wanaagsan oo iskaashi la tiro ka mid ah shirkadaha si fiican u yaqaan, oo ay ku jiraan Group Doosan ah, Pall Corporation. Haddaba, Headman helay ISO9001, IATF16949: 2016 maaraynta tayada nidaamka shahaado, ISO 14000 shahaado maamulka deegaanka, isagoo mid ka mid ah shirkadaha oo ah agaasimaha guddiga sari engine Shiinaha gudaha filter ururka, oo ah xubin ka tirsan Shiinaha Technology Market Association Safayn iyo Kala Society.
Continued ka baxsan shirkadu waa howlgalka Headman ee. Waxaan jeclaan lahaa inaan si kal iyo iskaashi kula si ay u abuuraan brand caalami ah iyo mustaqbal wanaagsan si wadajir ah!
Si adag Control, si joogto ah u-hagaajinta, Joogto Innovation, qanaca Customer
Si adag KONTOROOLKA:
Anfaco faahfaahinta farsamada ee IATF16949: 2016 si adag u hirgeliyaan nidaamka maaraynta tayada si loo hubiyo in waxyaabaha ay tahay in uu buuxiyaa shuruudaha macaamiisha ah ee.
Si joogto ah HAGAAJINTA:
iyada oo loo marayo tababarka, hanuun iyo sahaminta ee ka iman kara shaqaalaha, si kor loogu qaado shirkad si joogto ah loo horumariyo hufnaanta, yaraynta kharashka, iyo sii joogo horumar waara.
Si joogto ah curinta iyo qancinta macaamiisha:
Si joogto ah horumarinta daydo cusub waxyaabaha ku haboon si loo gaaro ka baxsan macaamiisha laga filayo iyo kor loogu qaado qancinta macaamiisha.
Filter shidaalka Cunsurka , Filter Engine Shiidaalka Cunsurka Price , 100 Qaybaha Filter Micron Shiidaalka , Qaybaha Filter shidaalka, Filter Wabka Shiidaalka Qaybaha , Filter C0506 Shiidaalka Cunsurka ,